न्यायका लागि लड्डालड्दै बहुलाईन बुद्धमाया - फ्री प्रेस नेपाल
न्यायका लागि लड्डालड्दै बहुलाईन बुद्धमाया
by अशोक दर्नाल
१९ आश्विन २०७५, शुक्रबार १०:५४
मानसिक अस्पताल पाटनमा बुद्धमाया
पानी छोएको आरोपमा कुटाई सहनुपरेकी बुद्धमाया विश्वकर्माले डटेर न्यायिक लडाई लडिन । दोषीलाई सजाय पनि दिलाईन । तर उनको यहि साहस अहिले अभिशाप भैदिएकोछ । समाजले लखेटेपछि बुद्धमायाले दुई दुई चोटी आत्महत्या प्रयास गरिन । मानसिक सन्तुलन गुमाईन ।
मानसिक अस्पताल पाटनमा बुद्धमायामानसिक अस्पताल पाटनको गेटबाट छिरेर पाँच सय मिटर अघि बढेपछि पुगिन्छ साढे दुई तले भवन जहाँ एकजना संघर्षकी देवीलाई समाजको दैत्य चिन्तनले अर्धचेत अवस्थामा पुर्याईदिएकोछ । तिनै देवीको दर्शन गर्न ४ अक्टोबर विहिबार विहान ११ बजे गेटभित्र पस्दा रोईकराई, होहल्ला र चिच्याहटले हाम्रो स्वागत गरिरहेकोथियो । कोहि मस्त निद्रामा यत्रतत्र फालिएका थिए । क्रन्दनका स्वरहरु अधिकाँश महिलाका थिए ।
हामीलाई बेड नम्बर ४२ मा पुग्नुथियो । परिचित अनुहार खोज्दै अगाडि बढ्यौं । नर्सहरुलाई सोध्दै त्यहाँ पुग्दा बेड नम्बर ४२ खाली थियो । यो बेड बुद्धमाया विश्वकर्माको नाममा रिजर्व गरिएकोथियो । तिनै बुद्धमाया जो जातीय भेदभाव बिरुद्ध डटेर लडेकि मात्र थिईनन्, दोषीलाई जेलको चौघेराभित्र ठेलिदिएकि पनि थिईन ।
कोठाबाहिर निस्किएपछि चौरमा पाँच जना मान्छेको बीचमा घेरिएर बसेकी बुद्धमाया टाढैबाट निराश र मलिन देखिन्थिन । नजिक पुग्दा थाहा भो– श्रीमान र दुई आफन्तको रोहबरमा दुई नर्सले बुद्धमायालाई काउन्सिलिङ गरिरहेकाथिए ।
३ दिनअघि अर्थात सोमवार आफ्नै सलले घाँटीमा पासो लगाई आत्महत्या गर्न खोजेकी बुद्धमायालाई नर्सहरुले बचाई निरन्तर निगरानीमा राखि काउन्सिलिङ् गर्दै आईरहेका रहेछन् । ‘त्यसदिन हामीले नदेखेकोभए अनर्थ हुनेथियो ।’ काउन्सिलिङ्मा खटिएकी नर्स सविता खड्का भन्छिन्, ‘ दुई दिनमा धेरै परिवर्तन भएकोछ ।’
यो उनको दोश्रो आत्महत्याको प्रयास हो । बुद्धमायाले यसअघि असारमा पनि आत्महत्याको असफल प्रयास गरेकि थिईन ।
बुद्धमायाको अहिलेको दुर्दशा बुझ्न ६ महिना पछाडि फर्कनुपर्ने हुन्छ । घटना बैशाख १५ गते साँझको हो । बर्दिबास वडा नम्बर ४ माईस्थान भब्सी हवलदार टोलमा बस्ने बुद्धमायाकै छिमेकी कमला गिरी र उनका भान्जा रामबाबु दाहालले पानी छोएको भन्दै बुद्धमाया र छोरी मनीषालाई गाली–बेइज्जत गर्दै कुटपिट गरे ।
अनाहकमा कुटाई खाएपछि बुद्धमायाले त्यसको प्रतिवाद गरिन । न्यायका निम्ति सम्बन्धित निकाय समक्ष पुगिन । गाउँलेले मिलापत्र गर्न दवाव र प्रभाव पार्दा समेत उनले आफ्नो अठोटलाई किन्चित डगमगाउन दिईनन । उनले न्याय पनि पाईन ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ को दफा ३ र दफा ४ (३०) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर गर्दै न्यायाधीश डण्डपाणि शर्माको इजलासले कमला गिरीलाई ६ महिना जेल र दश हजार जरिवाना तथा पीडित बुद्धमायालाई ५० हजार क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गर्यो । जिल्ला अदालत महोत्तरीको यो फैसला २४ असारमा सुनाईएकोथियो ।
तर यहि फैसला बुद्धमायाको निम्ति अभिशाप बन्न पुग्यो ।
बुद्धमाया आफुले न्याय पाएकोमा खुशी हुँदै घर फर्किइन । जातीय भेदभावको चरम दुर्दशा भोग्दै आईरहेको दलित समुदायका निम्ति बुद्धमायाको साहस सलाम योग्य थियो । किनकी धेरैले यस्तो दुषित सामाजिक चिन्तन बिरुद्ध त्यति ठुलो विद्रोह गर्ने आँट देखाउन नसकिरहेका बेला बुद्धमाया नजीर बनेर उभिएकि थिईन । तर उनका अगाडि चुनौतीको अजंगको पहाड उभिएकोथियो, जसको कल्पना समेत बुद्धमायालाई थिएन ।
गाउँ फर्किएकी मात्र के थिईन, गाउँलेहरु स्वागत हैन घृणा र दुरदुरले भरिएका शब्दहरुले आक्रमण गर्न आईपुगे ।
त्यसो त न्यायिक संघर्षको यो बीचमा उनले समाजका मै हुँ भन्ने हरुका मानसिक त्राण नझेलेका होईनन तर त्यसले उनी बिचलित थिईनन । आफ्नै छिमेकीलाई जेल पठाउने कुलगाँर भन्दै घर फर्किएकी उनीमाथि सबै एकोहोरो खनिए । बुद्धमायालाई उल्टै दोषी करार गरियो । दिनदिनै कचकच सुनाईन थालियो । समाज एकातीर आफु मात्र एकातर्फ भएपछि बुद्धमायालाई पनि ‘ऐ साँच्चिकै गल्ति मेरै रहेछ कि क्या हो ? मैले बेकारमा उजुरी गरेछु’ भन्ने चिन्ताले सताउन थाल्यो । सन्तापले भतभति पोल्न थालेपछि उनी राम्ररी निदाउन पनि सकिनन् ।
त्यसपछि बुद्धमायाले लिएको निर्णय कठोर मात्र थिएन, हाम्रो सामाजिक न्यायको बिकृत मुहार समेत उदाँगो पार्ने प्रकृतिको थियो । २७ असारका दिन उनले विष सेवन गरि आत्महत्याको प्रयास गरिन । उनलाई तत्काल शुभस्वस्तिक अस्पताल लगिएकोथियो । थप उपचार गर्न काठमाण्डौ लग्न भनिएपछि दलित अनलाईन डटकमको पहलमा ग्रिन सिटी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गराइएकोथियो भने सहिद गंगालाल अस्पताल बासबारीका मुटु विशेषज्ञ डा.रामेश कोइरालाले निशुल्क शल्यक्रिया गरेका थिए ।
बेलैमा उद्दार गरिएकोले उनको ज्यान त जोगियो तर बुद्धमायाको दिमागमा बसेको दलित हुनुको भयावह पीडाको जलन झन झन दन्किदै जान थाल्यो । बुद्धमायालाई क्रुर जात ब्यवस्थाको मानसिक चक्रब्यूहमा यस्तरी फसाँईयो कि उनको मानसिक क्षमताले समेत त्यसको बोझ उठाउने सामथ्र्य राखेन ।
उनी बिक्षिप्त हुदैं जान थालिन । मानसिक अवस्था बिग्रदै जान थालेपछि १३ दिन अघि उनलाई पाटन अस्पतालमा भर्ना गरिएकोथियो, जहाँ उनले दोश्रो चोटी आत्महत्याको प्रयास गरिन ।
बुद्धमायाको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरुको भनाईमा यो १३ दिनको अवधिमा उनी धेरैचोटी गेटबाट बाहिर निस्किने प्रयास गरिन । उनी न श्रीमानसंग बोल्छिन्, न छोरीसंग खुल्छिन् । एकोहोरिएकिछन् । उनलाई औषधी खुलाउन समेत हम्मे हम्मे पर्छ । उनको अवस्था सुध्रन अझै समय लाग्ने बताईएकोछ । केहि समयअघि ढपक्क बलेकी बुद्धमायाको शरिर निकै गल्दै गएको छ । अनुहारमा कुनै रस छैन । ओठ कलेटी परेर पक्क पक्क फुटेको छ ।
उनले हामीलाई पनि एकोहोरो हेरिरहिन । ‘मलाई मर्न मन छ मर्न दिनोस् ।’ धेरै करकाप गरेपछि उनी बोलिन्, ‘ मैले बाँचेर के गर्ने ?‘ हामीसंग बुद्धमायाले एक घण्टाको अवधिमा बोलेको यति मात्र हो ।
हिंजो तथाकथित उच्च जातका बिद्धानले बहुसँख्यक गरिब, सीमान्तकृत र कमजोर वर्गका मान्छेहरुलाई लुटेर खान सचेतनापूर्वक बनाएका जातीय ब्यवस्था (बर्णाश्रम ब्यवस्था) ले सयौं बर्ष यता आईसक्दा समेत आफ्नो रंग देखाउन छाडेकोछैन । जातका आधारमा कल्ले के गर्ने कल्ले के नगर्ने जस्ता बिभेदकारी सामाजिक कानुन बनाईरहेको यस्तो ब्यवस्थाका पक्षपोषकहरुकै कारण आज संघर्ष र न्यायका देवी बुद्धमायाहरुलाई मानसिक सन्तुलन गुमाउन बाध्य पारिरहेकोछ । आत्महत्या गर्न बाध्य पारिरहेकोछ । आफुलाई दलित पददलितहरुको मसीहा दावी गर्ने र दुई तिहाईको दम्भ भर्ने कम्युनिष्ट राजमै यस्तो दुर्दशा भोग्नुपरिरहेकोछ ।
त्यसैले अब यी प्रश्नहरु नगरि भएकोछैन – कुनै भौतिक अस्त्र प्रयोग नगरिकन मान्छेको वध गर्ने बिषाक्त शास्त्रको अझै कतिन्जेल प्रवर्द्धन गरिरहने हो? के बुद्धमायाहरुको हत्या गर्ने साँस्कृतिक स्वरुप धारण गरेर मान्छेको मगजमा राज गरेको जात ब्यवस्थालाई यसरी नै हुर्काईरहने हो ? के यस्तो अभिशप्तबाट मुक्त हुन अझै अरु बुद्धमायाहरुको पनि बलिदानी खोजिएको हो ? हेर्नुछ, आफुलाई सर्वज्ञाता ठान्ने बौद्धिक ठेकेदार, मानवअधिकारवादी, संचारकर्मी, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक दलहरुको चिन्ता र चासो ब्यक्त हुन अझै यस्ता कति ओटा दुर्घटना दोहोरिनुपर्ने हो ।
Tags: Ashok Darnalissue-2अंक-२अशोक दर्नाल
फोहोर सफा नगरेको भन्दै डोम बिद्यार्थी बिद्यालयबाट निष्कासन